News 18 Nepal || जब कक्षा कोठाभित्रै दुई विद्यार्थीले गरे एक आपसमा विवाह
जब कक्षा कोठाभित्रै दुई विद्यार्थीले गरे एक आपसमा विवाह
एजेन्सी । भारतको आन्ध्रप्रदेशस्थित एक विद्यालयमा दुई जना किशोरावस्थाका विद्यार्थीहरुले एक आपसमा बिहे गरेको भिडियो भाइरल बनेपछि त्यसले ठूलो तहल्का मच्चाएको छ । आन्ध्रप्रदेशको पूर्वी गोदाबरी जिल्लास्थित राजामहेन्द्रवरममा रहेको एक जुनियर कलेजमा कक्षा कोठाभित्रै एक जना किशोर तथा अर्की किशोरी विद्यार्थीले आपसमा बिहे गरेका हुन् ।
उक्त घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले बाल विवाह निषेध ऐन बमोजिम जाहेरी दर्ता गरेको भारतीय पत्रिका द हिन्दुले जनाएको छ । कक्षा कोठाभित्रै बिहे समारोह भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेसँगै स्थानीय प्रहरीको ध्यानाकर्षण भएको थियो ।
अधिकारीहरुका अनुसार नाबालिक उमेरका विद्यार्थीबीच कक्षा कोठामा भएकोे बिहे अवैध भएको हुँदा रद्द गरिएको छ र केटाकेटी दुबै जनालाई मनोपरामर्श दिइएको छ । किशोरीलाई आन्ध्रप्रदेश महिला आयोगले संरक्षण गृहमा राख्ने भएको छ ।
कक्षा कोठाभित्र दुई विद्यार्थीको बिहे कसले गराएको हो भन्ने विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ । प्रविणता प्रमाणपत्र तहमा अध्ययनरत ती किशोर–किशोरीहरु एकै कक्षाका सहपाठी हुन् ।
भिडियोमा देखाइए अनुसार १७ वर्ष उमेरका किशोरले आफूले ल्याएको मंगलसुत्र कक्षाकोठामै ती किशोरीलाई पहिराइदिए । पछि उनले किशोरीलाई सिन्दुर लगाइदिए र बिहे सम्पन्न भयो । त्यससँगै उक्त जोडीले केही युगल तस्वीर पनि खिच्यो ।
कक्षाकोठाभित्रको उक्त बिहेको भिडियो उनीहरुकै सहपाठी एक अर्की किशोरीले खिचेकी हुन् । घटना सार्वजनिक भएसँगै विद्यालय व्यवस्थापनले बिहे गर्ने ती किशोर–किशोरीलाई निष्कासन गरेको छ ।
उक्त घटनापछि किशोरीलाई उनीहरुका बुवा–आमाले घरमा छिर्न दिएनन् । जसका कारण उनलाई एक स्थानीय मनोपरामर्शदातृ संस्थामा लगियो । केटाका अभिभावकसँग पनि कुरा गरेर उसलाई मनोपरामर्श दिइयो ।
प्रहरीले उक्त घटनाका सम्बन्धमा जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । प्रहरीले बिहे गरेको भनिएका किशोर–किशोरी तथा उनीहरुका अभिभावकका साथै विद्यालय प्रशासनको समेत बयान लिने छ । अनुसन्धानका क्रममा दोषी पाइएकाहरुलाई कारवाही गरिने प्रहरीले जनाएको छ ।
जब विवाहको दिन बेहुली आफ्नै बहिनी भएको थाहा भयो !
१८ वर्षकी किशोरीको गराइयो कुकुर सँग बिहे !
जन्मियो अनौठो बच्चा : आधा शरिर मानिस, आधा माछा
किन यी महिलाले लोग्नेलाई मारेर पकाइन् मासु ?
७ कक्षामा पढ्ने किशोरसँग भागिन् तीन बच्चाकी आमा !
दुइ वटा दाँत भएकी छोरी जन्मेपछि..
श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर छोरासँग विहे !
अनौठो रुख, जसलाई काट्दा निस्किन्छ रगत